Famerenana: Ubuntu Mate Beta 2, birao iray ho an'ny olona tsy mitaky fofona | Avy amin'ny Linux
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Percaff_TI99 ary nalaina tanteraka GUTL Portal ary nandalo fanovana kely fotsiny izy tamin'ny fanontana azy
Manohy mandroso izao tontolo izao miaraka aminy ireo teknolojia vaovao. GNU / Linux tsy afa-maina amin'izany, iaraha-mahalala fa samy orinasa kanônikal (Ubuntu), amin'ny maha mpamorona ny Gnome, Nanapa-kevitra ny hanao fiovana mankany amin'ilay antsoin'ny maro hoe paradigma birao vaovao izy ireo.
Ny fiakaran'ny fitaovana finday sy ny takelaka dia nandrisika ny fampandrosoana ny Akorandriaka gnome (GTK3) ary Ubuntu Unity mba hanatsarana ny mifanentana sy ny vokatra azo avy amin'ireo fandrosoana ireo. Tsy raharahaina ny fampandrosoana ny Desktop GNOME nentim-paharazana (GTK2), zavatra nilaina raha te hifaninana amin'ny tsena androany ianao.
Ity fanapaha-kevitra ity dia fandrosoana ara-teknolojia lehibe ho an'ny mpampiasa maro, ny hafa (ao anatin'izany ny mpamorona) dia nahatonga ny fisalasalany momba ny traikefa amin'ny birao. Misy koa ireo mieritreritra an'izany Ubuntu 10.04 Lucid Lynx io no kinova farany tsara indrindra an'ny Ubuntu, ary tsy miova mihitsy ny hevitro.
Amin'io lafiny io dia tena zava-dehibe ny feon'ny fieritreretana; ary mifototra amin'izany dia nanapa-kevitra ny mpandraharaha iray fa hitazona ny biraon'ny birao velona GNOME tetikasa famoronana nentim-paharazana VADIKO.
Trano famakiam-boky amin'ny birao VADIKO (MDE) dia ao amin'ny trano fitehirizan'ireo fizarana be mpahalala indrindra. Io dia fanentanana lehibe ho an'ny Tetikasa VADIKO, Clement lefebvre (Linux mint) dia iray tamin'ireo voalohany nanome ny fanohanany.
Fizarana izay manohana VADIKO:
Repositories tsy ofisialy (kasaina ampidirina ao amin'ny tahiry ofisialy).
Ao amin'ny rafitra *BSD:
Na izany aza fizarana iray tsy hita ary mety nandrasan'ny mpampiasa maro an'i Ubuntu izay mbola mitazona ny safidiny amin'ny desktop GNOME nentim-paharazana dia Ubuntu VADIKO.
Ubuntu MATE Izy io dia rafitra miasa azo antoka sy mora ampiasaina miaraka amin'ny tontolon'ny birao azo ovaina. Mety ho an'ireo izay maniry ny fahombiazan'ny sehatr'asa ambony indrindra, solosaina findainy ary ny netbook ary aleony fanoharana amin'ny birao nentim-paharazana. Miaraka amin'ny fitakiana maotera maotina dia mety amin'ny toeram-piasana maoderina sy ny fitaovana efa taloha.
ihany koa Ubuntu MATE mametraka andiana tanjona sy tanjona maromaro:
Azo alefa amin'ny olon-drehetra, na inona na inona fahaizany fiteny sy ara-batana.
Ampitomboy ny fananganana mpiserasera amin'ny Ubuntu sy latabatra VADIKO.
Ubuntu ho solon'ny solosaina izay tsy matanjaka loatra amin'ny fampandehanana ny biraon'ny effets.
Safidy voalohany amin'ny sehatra Ubuntu ho an'ny vahaolana amin'ny toeram-piasana lavitra toy ny LTSP
Avereno ny andro falifaly Ubuntu alohan'ny fampidirana ny Unity
Mampiasà lohahevitra sy zavakanto mitovy amin'izany Ubuntu so it Ubuntu MATE fantaro avy hatrany.
Rehefa azo atao ny mandray anjara Debian noho izany ny fiarahamonina Debian y Ubuntu mahazo tombony izy ireo.
Fisafidianana fonosana izay hanohana ny fiasa sy ny fitoniana ny hazavana sy ny nofinofy.
Omeo toeram-pialofana ho an'ny mpampiasa ny Linux izay aleonao an'ohatra an-tserasera desktop.
Noraisina ho "tsiro" ofisialy izy Ubuntu.
2 Fisehoan'ny Ubuntu Mate
3 Applications Ubuntu Mate
4 Endri-javatra Ubuntu Mate
5 Fepetra takiana amin'ny Hardware minimum ho an'ny Ubuntu Mate
6 Fepetra takiana amin'ny Hardware
Ny sary ubuntu-mate-14.10-beta2-desktop-i386.iso Nampidiniko avy tao amin'ny tranokala ofisialin'ny Ubuntu MATE. Ny fametrahana dia natao tao VirtualBox izay nanendriko 900 MB RAM sy habaka disk 8 GB.
Ny mpamosavy dia mitarika antsika amin'ny fizotry ny fametrahana azy rehetra, toy ny ankamaroan'ny fizarana miorina amin'ny Ubuntu. Tsy hanana olana amin'izany ny mpampiasa; na izany aza, azonao atao ny mandefa ny haino aman-jery mivantana nefa tsy mametraka ny rafitra.
Fepetra takiana 6,3 GB habaka kapila
Karazana fametrahana (ampiasao kapila iray manontolo, fizarazao encrypt, fampiasana LVM)
Fanamboarana: Mpampiasa sy teny miafina
Login dia tantanan'i LightDM. Amin'ny maha endri-javatra fanampiny anolorana antsika hanomboka fotoam-pivoriana, ity safidy ity dia tsy mahafaly ahy loatra na dia voafafa daholo aza ny angon-drakitra notehirizin'ny vahiny rehefa nivoaka ianao. Ny tiana holazaina dia hoe iza no hanana fidirana amin'ny rafitra misy ahy nefa tsy mampiasa teny miafina, dia hevitra manokana manokana izany.
VirtualBox Tsy nanova ny haben'ny efijery izany raha sendra ny ankamaroan'ny fizarana, fa mora ny mamaha azy amin'ny alàlan'ny menio VirtualBox: Fitaovana »Ampidiro ny sary CD an'ny«GuessAdditions»Na amin'ny fanindriana ny Host + D. Avy eo amin'ny alàlan'ny terminal, mametraka ny tenantsika amin'ny adiresy misy ny CD isika ary manatanteraka ny script fametrahana.
Fisehoan'ny Ubuntu Mate
Ity fizarana ity no nahitana fiovana lehibe, ny lohahevitra vaovao ho an'ny haingon-tsary sy ny haingon-trano eo am-baravarankely dia efa afaka jerena amin'ity kinova 14.10-beta2 ity.
Samy ny lohahevitra GTK default Ambiant-MATE ary ny Wallpaper dia noforonina tamin'ny loko maitso ho loko miloko (momba ny lokon'ny ravina mate yerba) nefa tsy miala amin'ireo lohahevitra mahazatra an'ny Ubuntu. Mihabetsaka ny fizarana miaraka amin'ireo loko miavaka ireo.
Mety zavatra tsy ho hita eo amin'ny birao io GNOME maoderina, mora ny fanaingoana.
Applications Ubuntu Mate
Ubuntu Mate Izy io dia miaraka amina fampiharana marobe, ankoatry ny Accessibility (implicit amin'ny ankamaroan'ny distros rehetra) lazaiko:
Mpijery sary Maso an'ny MATE 1.8.0
Mpanonta lahatsoratra Pen 1.8.1
Lectern 1.8.0 Mpijery antontan-taratasy
Ubuntu MATE tsy manana ny codec multimedia sy flashplugin napetraka, toy ny mahazatra ao Ubuntu fonosana tsy maintsy alaina Ubuntu-voafetra-Extras.
Endri-javatra Ubuntu Mate
Nvidia 304.123 (kinova ankehitriny)
Fepetra takiana amin'ny Hardware minimum ho an'ny Ubuntu Mate
512 megabytes (MB) an'ny RAM
8 gigabytes (GB) misy habaka kapila misy
Fiara DVD-ROM bootable
Kitendry sy totozy (na fitaovana fanondro hafa)
1024 x 768 na mpanara-maso vahaolana avo lenta kokoa sy adapter video
Fepetra takiana amin'ny Hardware
16 gigabytes (GB) misy habaka kapila misy
Kapila USB bootable
Adaptatera video 3D sy monitor amin'ny widescreen misy vahaolana 1366 x 768 na vahaolana avo kokoa
Mpandahateny na headphone
Tena nilamina ny rafitra, tsy nanana olana aho tamin'io lafiny io, na dia teo aza izany RafitraD nitatitra hadisoana sasany tamin'ny fivoahan'ny baiko dmesg manondro ny systemd-logind, raha tsy izany dia niasa tsara ny zava-drehetra.
Raha ny fampiharana fampiharana sy ny fitondran-drindrina dia tsy nilamina toa ny tiako io, mahazatra io rehefa mihazakazaka amin'ny milina virtoaly miaraka amin'ny MB izay notendreko. Amin'ny kapila mafy ny fampisehoana dia tokony ho tsara kokoa; na dia eo aza ny rafitra misy farafahakeliny takiana toy ireo atoro anao, dia ratsy ny fahombiazany.
Fotoana mety tsara ho an'ireo mpampiasa izay mbola mitazona ny filohany mialoha Ubuntu saingy nifindra izy ireo taorian'ny fampidirana ny Unity. Ankehitriny dia manana kinova vaovao azo isafidianana amin'ireo efa niorina izy ireo, toy ny: Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu-gnome, Ubuntu-kylin, Ubuntustudio y Xubuntu.
Tranonkala Ubuntu Mate: https://ubuntu-mate.org/
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Famerenana: Ubuntu Mate Beta 2, birao iray ho an'ny olona tsy mankasitraka
Efa ela aho no nampiasa izany dia nampiasa vady amin'ny Linux Mint sy Ubuntu
ny vady amin'ny debian dia tena tsara toa ny archlinux
Rehefa nametraka an'i Debian Jessie tamin'ny PC aho tamin'ny Mey tamin'ity taona ity dia mbola tsy MATE izany.
ny vady amin'ny debian miaraka amin'i kde no biraonao izay milamina ary tsy nanana olana aho
kanelina amin'ny mint, ary gnome3 amin'ny debian dia fanaintainana amin'ny boriky
Mampiasa kanelina amin'ny finiavana aho saingy tsy marim-pototra amin'ny tsiriko izany fa tokony ho ny gnome 3 no hatolotra ho solon'ny pc desktop.
tsara tarehy izy ireo nefa mamela zavatra maro irina anaty filaminana ho an'ny tsiroko na tranga manokana
Raha sanatria averiko indray i Debian Jessie dia aleoko manao azy amin'ny alàlan'ny fametrahana ny lohahevitra greybird ho an'ny MATE mba hitovy amin'ny Kanelina izany ka hialako ny olana. : v
ary tsy misy repo hametrahana azy amin'ny ubuntu iraisana?
azonao atao ny manampy tranombarotra mint sy manamboatra apt-pinning
na mikaroha dia misy toerana fitahirizana andrana, ampiasao izy fa tsy tiako, mandeha tsara kokoa noho ny repo mint
na mampiasa repository ubopika ubuntu
Raha misy, fa efa nanandrana aho ary tsy mandeha tsara, tsy omeko soso-kevitra fa ppa io.
mahita ny ubuntu utopic repo dia tsy hampiasa azy aho satria mampiasa systemd ary ny trusty tsy
ny repo mint dia tsara kokoa
Avy amina fametrahana kely ny ubuntu misy kanelina aho (nanandrana ny vady ihany koa aho) mihazakazaka tsara kokoa noho ny mametraka mint mba ho maina
avy amin'ny repo mint dia ny birao ihany no ampiasainao
Ity no toeram-pivarotana ofisialy natambatry ny mpiasan'ny Ubuntu Mate ho an'ireo mpampiasa Ubuntu 14.04:
Manana fitoviana mitovy 14.04 + MATE 1.8.1 aho ary tena mety amiko.
sputnik dia hoy izy:
Voalaza «Vox populi».
Mamaly an'i sputnik
jamac4k dia hoy izy:
Misy fizarana iray hafa, miorina amin'ny Debian Testing, izay manome ny desktop Mate: Sparky Linux. Izy io dia manana safidy birao bebe kokoa toa ny LXDE, e18, Open Box, Xfce, Razor-Qt, sns.
Mamaly an'i jamac4k
Menz dia hoy izy:
Tadidiko ireo fotoana nampiasako ny Ubuntu 10.10, ho ahy ny Rafitra fiasa tsara indrindra hatrizay, ny hafainganam-pandehany, ny fanaingoana azy, miampy ny vokan'ny Compiz dia ny fanomezana fikitihana tsy manam-paharoa hoe inona io kinova io, indrisy fa fantatry ny maro, rehefa tonga Unity ny zava-drehetra dia nihodina 360 degre ka nahatonga ny fiovana faratampon'ny tontolo iainana na OS. Manantena aho fa ity kinova vaovao ity dia hahazo ilay Ubuntu lehibe taloha.
Hanandrana aho, misaotra! 😀
Valiny tamin'i Menz
Misaotra betsaka anao @elav, hojereko ny fanovana;). Tena tsara ny fandaminana ny sary, hangalariko ny hevitrao = D
Fahatsiarovana tsara inona no entiny miverina amin'ny fahitana ny birao Gnome nentim-paharazana indray!
Rehefa nifindra tamin'ny Ubuntu tamin'ny kinova 8.04 LTS aho dia nifanaraka haingana tamin'ity tontolo ity. Avy eo tonga ny Unity ary nandany vola kely kokoa tamiko; fa hey, eto izahay. Raharaha ny fanokafana fiovana vaovao.
Raha ny fahalalako azy, ary misy manitsy ahy raha diso aho, amin'ny MATE tsy azonao tantanana ny loko. Toy izany koa no mitranga amin'ny XFCE. Heveriko fa tsy fahampiana lehibe ny tsy fahaizana mamaritra ny monitor. Izay no antony ampiasako ny OpenSUSE KDE. Tena tiako ny gnome 2, raha ny tena izy dia manana ny KDE 4.14 ho gnome 2 ^^ aho.
Famerenana tsara natao izany ka saika nahatonga ahy hanala an'i Antergos ary hampiasa Ubuntu xD indray ... ny marina dia malahelo an'io birao io aho: izany no nahafantarako ny Ubuntu ary, noho izany, ny GNU / Linux tamin'ny taona 2006- 2007.
Hevitra tsara 😀
Nihaona tamin'i Debian Lenny niaraka tamin'ny GNOME 2. Efa niaraka tamin'ny Squeeze aho, lasa tiako io.
Ity dia iray amin'ireo fizarana izay ilazany anao hoe:
Devoly! Tokony nametraka Ubuntu MATE aho fa tsy Debian.
Eny, misaotra an'i Debian Jessie hiaraka amin'ny MATE.
Tadidiko koa ny Gnome2… fotoana firy !!!!!!
Noho ny fahalianana dia nametraka Ubuntu-Mate tamin'ny solosaina finday (3gbram, 1,65GHz x2) aho, ny fitsapana distros amin'ny VirtualBox dia tsy miaraka amiko, toy ny namelany anao hizaha fiara ianao, fa ianao kosa miditra amin'ny sezan'ny mpandeha, na dia takatro aza fa ilaina izany raha tsy manana fitaovana bebe kokoa ianao.
Tsy nanana olana tamin'ity beta ity aho, ny fametrahana marina, ny fanjifana ram faran'izay ambany, ny boaty ary ny fampiharana dia misokatra haingana, 100% azo ampifanarahana,. temotra birao tena mahomby.
Aza avela apetraka amin'ny antony telo. Ny voalohany dia beta io, ny faharoa dia tsy kinova LTS ary ny fahatelo dia efa zatra na zatra ny Gnome Shell aho. Rehefa tonga ny Unity dia nampahafantatra ahy bebe kokoa momba ny KDE (birao tena tsara) izy fa tamin'ny farany dia niverina tany Gnome aho tamin'ny andiany 3. Vaovao tsara, misaotra.
Fa kosa, toy ny avela hitsapana fiara amin'ny simulator izany
Toy ny mijery ny filentehan'ny masoandro amin'ny fahitalavitra
Ny marina dia miaraka amin'ny fivoaran'ny Xfce miadana isaky ny manipy ahy bebe kokoa i Mate. Izaho, toa ny maro, dia mpampiasa Gnome 2 ihany koa ary nahita ny fialofako tao Xfce.
Handinika ny hanolo ny Xubuntu amin'ny Linux Mint 17 amin'ny Mate aho. Na dia miorina amin'ny Ubuntu aza dia toa tena tsara ihany koa. Tena ratsy fa tsy LTS.
Janik dia hoy izy:
Mint 17 dia LTS satria miorina amin'ny Ubuntu 14.04 LTS.
Valiny tamin'i Janik
Famerenana tena tsara! Namela tsiro tena tsara tao am-bavako momba ny MATE. Saingy hanova haingana ireo kisary volomboasary ho an'ireo sary maitso ireo ihany aho: 3. Ankoatra izany, amin'ny fotoana rehetra dia apetrako ny MATE amin'ny milina Ubuntu
Ator2 dia hoy izy:
Point linux-mate-feno 3; Nametraka azy aho ary mahafinaritra. Ilay Debian vaovao indrindra any ivelany any ary miasa tsara no anolorako azy. Sludos
Valiny amin'i Ator2
Azon'izy ireo atao ny manao famerenana ny deepin2014.1, mahafinaritra izany ... na dia hitako aza fa ratsy noho ny 2013 izy io, porofo "mpampiasa" kokoa io, kitihina fotsiny.
Vao omaly aho dia nanapa-kevitra ny hametraka ny Ubuntu Mate ary ny tsy nampoiziko, satria izaho debianero betsaka noho ny ubuntero, dia gaga aho tamin'ny fomba fiasa, ka mieritreritra aho fa hijanona miaraka aminy mandritra ny fotoana lava. . Tsy ilaina intsony ny milaza azy, faly ianao mahita ilay latabatra mitovy hitanao tamin'ny nanombohanao an'ity 4 taona lasa ity (raha ny amiko).
danistov dia hoy izy:
Tiako kokoa ny ElementaryOS miaraka amin'ny Phanteon-ny, izay tsara tarehy. Talohan'ny tena tiako ny tontonana Gnome fa tsy te hiverina ara-potoana aho ...
Mamaly an'i danistov
Tsy te handroso ara-potoana aho fa manakaiky kokoa ny fandroahana antsika fotsiny ... Efa lany ny haren'ny planeta, lany ny masoandro ...
Ny filozofia kapitalista andrefana izay tsara kokoa dia tsy mety amiko, izay miasa tsara ho an'ireo izay manana zavatra hafa ankoatry ny vokatra amidy ary faobe manana vola ampy hividianana azy fotsiny. Raha ny antitra efa manompo ahy ary miasa tsara kokoa, maninona aho no mila ilay vaovao? Miaraka amin'ilay vaovao dia tsy ho afaka hanao bebe kokoa noho ny mihemotra aho, jereo ny tranga Gnome 3.
Indraindray mila miverina ianao mba handroso ...
Miala tsiny amin'ny lelafo psudo trolling nataoko.
offtopic: handinika ny gnome 3.14 ve ianao?
Izao no tianao holazaina? https://blog.desdelinux.net/gnome-3-14-analisis/
Misy olona afaka milaza amiko ve ny fahombiazany? Tsara ho an'ny ekipa efa taona vitsivitsy ve? Tsara kokoa noho ny Xubuntu na Lubuntu?
Heveriko fa mitovy amin'ny Xubuntu izany, saingy tsara kokoa raha tenenin'olona iray izay zatra mizaha toetra ny fanjifana.
Samy nanandrana aho, ny fihinanana loharano dia mitovy, fa ny Xfce kosa tsy mandany. Na izany na tsy izany, aleoko ny Mate satria mifangaro tsara kokoa izy io, vitsy ny bibikely ary misy safidy sy zavatra maro hafa.
Ny zavatra voalohany nataoko rehefa nametraka fizarana, ary nahita fa manana fizarana 5 ho an'ny linux 5 samihafa aho, dia ny fametrahana ny MATE. Mety tsara izany, miaraka amin'i Gnome 3 dia zavatra mitovy amiko no mitranga amiko toa ny tamin'ny KDE 4, tena tsara, tena chachi, saingy very aho. Ny tsirairay dia toy izao.
Ny olana tokana nananako tamin'ny Mate-Ubuntu dia ireo mpamily nouveau, mihantona ny solosainako. Tsy maintsy nanala azy ireo aho ary nametraka ireo avy any Nvidia, dia mandeha tsara izao.
Zavatra iray hafa manina ahy, aorian'ny fametrahana ireo fanavaozana dia 200Mg izy ireo, heveriko fa tokony havaozina kely kokoa, tsy haiko ...
Izaho dia mpampiasa GNOME hatramin'ny famoahana ny kinova vaovao izay mandraka androany dia tsy dia tiako loatra. Nisafidy ny hampiasa KDE aho ary tena afa-po amin'ny fomba fiasan'izy io.
Tsy dia milaza zavatra betsaka momba ny MATE aho, GNOME 2 izy io ary ny fampiasana azy dia toa mihemotra aoriana. Raha apetrako amin'ny solo-sainako izany dia hampahatsiahy ahy ny taloha fotsiny aho ary mety hijanona tsy hampiasa azy intsony aho aorian'ny ora vitsivitsy.
Fa hey, izany no fomba fijeriko ny toe-javatra. Tsy hametraka ny tenako amin'ny toeran'ny milaza amin'ny olona izay hampiasaina aho, mifidy izay mifanaraka indrindra amin'ny azy ny tsirairay.
apple3 dia hoy izy:
Niaraka tamin'i Mint Mate nandritra ny fotoana kelikely aho, 17 taona izao, ary mandeha araka ny tokony ho izy, toy ny tifitra iray izany.
Ao amin'ny solosaina finday misy ram 4gb sy fotony roa manomboka amin'ny taona 2008 dia tena mandaitra izy io, rehefa tsy miasa izy dia mangataka 200-220 megabytes ondrilahy fotsiny.
Ary ny miasa miaraka amin'ny solosaina gnome2 / mate dia mety izany, menio milamina, fihinana ram kely, azo alamina ary ampy fitaovana. Miaraka amin'ny mpandefa synaps dia tsy misy birao akaiky.
Mamaly an'i apple3
Esoriko izay nolazaiko fa hijanona ao amin'ny Ubuntu Mate vetivety aho, tafaverina ao amin'ny Debian aho.
Misintona ny Netinst farany anao ianao avy amin'i Jessie, beta 2, ary rehefa tonga amin'ny fisafidianana ny birao ianao dia misafidy Mate ary tonga amin'ny teboka mitovy amin'ny Ubuntu Mate, fa miaraka amin'i Debian, izay haingana kokoa hatrany.
Mba hanatsarana ny raharaha, ny fonosana murrine dia apetrakao amin'ny toerana misy anao, izany hoe apetrakao amin'ny tsindry iray monja ny Greybird, tonga foana koa ireo sary masina faenza. Raha fintinina, tsindrio 4 ary avelanao ho tsara tarehy i Debian miaraka amin'i Mate.
hao manina anao aho dia hoy izy:
Mieritreritra aho fa tsy afaka mampiasa ny lohahevitra Ubuntu izy ireo noho ny antony zon'ny mpamorona sns XD
Eny, azonao atao ny mametraka ny lohahevitra Ambiant Ubuntu, tsy misy olana. Resaka fampidinana azy io.
lava velona vady 🙂
Efa tiako ny hivoahan'ny chi stable izay chi 🙂
Tsy latabatra ho an'ny olona nostalgika izy io, fa amin'izao fotoana izao, ho an'izay te hiasa amin'ny fomba milamina, ary tsy misy olana amin'ny 'firaisankina', ankoatry ny hafa.
Luis Felix dia hoy izy:
Tena tsara ity bilaogy ity arahaba anao.
Valiny tamin'i Luis Felix
Nampiasa ubuntu mate nandritra ny taona maro aho ary mahafinaritra miaraka amin'ny ondrilahy 2GB sy kapila mangirana 320GB, ny marina dia faly amin'ny haitraitra ba aho satria ny marina dia miroborobo ny windows 10 ao amin'ilay pc hiarahako ihany. Ubuntu vady